Final Fantasy VIII ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော App Store | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Final Fantasy VIII ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကို App Store တွင်ရနိုင်သည်
Ignacio Sala | 29/03/2021 11:00 | အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး, အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ
ရက်အနည်းငယ်အကြာကျနော်တို့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ် FantasianFinal Fantasy Saga တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားရှာဖွေနိုင်သည့်ကစားနည်းနှင့်ကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းခေါင်းစဉ်ကို Apple Arcade မှသာရရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Apple Arcade အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက Final Fantasy VIII Remastered နှင့်အတူရှင်သန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်.
Final Fantasy VIII Remastered သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအက်ပလီကေးရှင်းသို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်ဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌စာအုပ်ပေါင်း ၁၀ သန်းနီးပါးရောင်းချခဲ့သည် နှင့်၎င်း၏အမည်အားညွှန်ပြအဖြစ် PC များအတွက်ဂိမ်းတစ်ခု remastering ဖြစ်ပါတယ်။
အံ့သြစရာ! #FinalFantasy VIII Remastered ကိုယနေ့ရရှိနိုင်သည်။ Google Play နှင့် App Store မှတဆင့်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်။
iOS က: https://t.co/MhrmZbEdUh
Android ဖုန်း: https://t.co/XtKEv8qKew pic.twitter.com/jTvLRBhtON
- နောက်ဆုံးစိတ်ကူးစိတ်သန်း (@FinalFantasy) မတ်လ 25, 2021
iOS တွင်စတင်ခြင်းကိုကျင်းပရန်အတွက် Square Enix သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်ပေးထားသည် ၄ င်း၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းအပေါ်4ယူရိုလျှော့စျေး။ Final Fatansy VIII Remastered မှာ ၂၂.၉၉ ယူရိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာAprilပြီ ၄ ရက်မတိုင်ခင်မှာ ၀ ယ်မယ်ဆိုရင် ၁၈.၉၉ ယူရိုသာအသုံးပြုနိုင်မှာပါ၊ ၄ ယူရိုလျှော့စျေးပါ။
Galbadia သည်စုန်းမ Edea ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သူ၏အင်အားကြီးမားသောစစ်တပ်များကိုကမ္ဘာ့အခြားနိုင်ငံများအပေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
Squall နှင့်အထက်တန်းလွှာကြေးစားအဖွဲ့ Seed ၏အခြားအဖွဲ့ဝင်များသည်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဝင် Rinoa နှင့်အင်အားစုများအနေဖြင့်အာဏာရှင် Galbadia အစိုးရကိုတက်ပြီး Edea ကိုလမ်းမလျှောက်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်သည်။
Final Fantasy VIII တွင် protagonists များကိုအကာအကွယ်ပေးရန်အသုံးပြုသောအင်အားစုများ၊ အုပ်ထိန်းသူများရှိပြီးမည်သည့်တိုက်ခိုက်မှုတွင်မဆို၎င်းတို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုထုတ်လွှတ်နှင့်အခြားဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူသင်၏စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်။
ရင်ပြင် Enix ရှိဘို့ သူတို့သည်ဤခေါင်းစဉ်ကိုအလျင်အမြန်ထုတ်လွှတ်ခဲ့ကြသည်, တူညီတဲ့၏ဖော်ပြချက်အတွက်ကြောင့်အချို့သောဖြစ်ရပ်များအတွက်မော်တော်ယာဉ်ဝင်ရန်သို့မဟုတ်ထွက်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါ, ထိုကဲ့သို့သောယာဉ်နှင့်မြေပြင်အနေအထားအကြားမှီဝဲခြင်းကဲ့သို့သောဂိမ်းကာလအတွင်းငါတို့ရှာတွေ့နိုင်သောပြproblemsနာများအချို့ကိုအကြောင်းကြားကတည်းက က x3 အလျင် function ကိုသုံးပြီးရွှေ့ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
ဒီခေါင်းစဉ်ကိုခံစားရန်လိုအပ်သောနေရာဖြစ်သည် 2,55 GB, iOS / iPadOS 13 နှင့်အထက်လိုအပ်သည် နှင့်အခြားဘာသာစကားများအပြင်စပိန်ဘာသာဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဂိမ်း၏ကန ဦး ငွေပေးချေမှုအပြင်အခြားမည်သည့်ထပ်ဆောင်းဝယ်ယူမှုလည်းမပါ ၀ င်ပါ။
နောက်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ် VIII remastered€ 22,99
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ » အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ » Final Fantasy VIII ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကို App Store တွင်ရနိုင်သည်
Consumer Reports သည် iPhone ကို ၂၀၂၁ တွင်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်
Apple AirTags ကဒေါ်လာ ၄၀ လောက်ကုန်ကျနိုင်တယ်